Ma La Joogaa Xiligii La Joojin Lahaa Qaadka |
Ma La Joogaa Xiligii La Joojin Lahaa Qaadka
Halkan waxaan ku falanqeyn doonaa arimo badan oo la xiriira sida uu qaadka u yahay shey umada somaaliyeed meel ay joogtay u naceen,waxaana taaas cadeynteeda soo baxday markii gabi ahaan laga joojiyay dalka ingiriiska Ka dib markii somali badan oo halkaasi ku sugan dareemen dhibaatada uu ku hayo.
Somali badan oo ku kala nool wadamo badan oo caalamka ah ayaa u arka in xiligani la joogo xiligii si toos ah looga joojin lahaa dalka somaliya Diyaaaradaha Qaadka geeya,kuwaasi oo Balaayiiin dollar kala soo Noqda dalka marka ay Kenya ama Itoobiya ku laabanaya.
Dawlada Kenya waxaay ay ka heshaa Qaadka somaliya Dhaqaalaha ugu badan dadka dhoofiya ayaa iyagu kaliya ka hela Macaashka marka 3 Loo Qeybiyo Hal meel barkeed,waxaana dhaqaalaha ugu badan ka hela dawlada kenya oo Wax badan ku bixisa sidii Jaadka loo geyn lahaa Tuulo kasta oo somaliya ah.
Markii dawlada ingiriisku dhawaan ku dhawaaqday in ay joojisay Jaadka wasiiro ka tirsan kenya ayaa waxaa ay Wafuud u direen London si loo hubiyo in dib loo furi karo iyo in sidaaas looga hadhayo,waxaase xubnahaasi la soo noqdeen Gacmo maran Kenya ayaa lumisay Faa iido badan oo ka imin jirtay Qaadka londan Gali jiray.
Somaliya markii dib ugu laabto Arimaha Qaadka waxay la mid noqdeen nolol maalmeedka Qofka uu la soo tooso maalin walba,waxaana Raga qaar aaminsan yihiiin in hadii uusan qaad jireen mashquul badan oo nolosha ah la gali lahaaa, taasi oo keeni lahayd amni daro waxaana taaas ay daliil uga dhigeen maalmo badan oo la soo maray wayadaasi uusan qaadku imaan.
dhinaca kalena markaad ka eegto arintan ayaa noqoneysa mid la iska yiri maxaa yeelay amaanka guud ee dalka waxaa masuul ka saaran yahay dawlada markaas jirta maadama aysan dowlad xoog leh oo dalka wada gaadha aysan jirin waxaa shaqeeya maamulo kala duwan oo awood u leh in ay ka hortagaan amni daro ka dhalata Qaadka oo la joojiyo.
Hooyoyin aan cidi u maqneen ceelna u qodneen ayaa waxaa ay sanad walba Iskoolada ka saaraan Caruur aan Aabo shaqeya aan lahayn ama uu geeriyoday Dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka kuwaasi oo noloshaas ka soo saara iibinta qaadka.
Hadaba maxaa ku hoos jira weeye su aasha halkaas ka imaaneysa waxaa ku jira caruurta waxaa nidaama oo nolosha mideeda san ku haga waa waalidka maadama aabaha meesha ka baxay Hooyadana ay shaqo tagtto waabarkii caruurtii ayaa meesha ka baxaya oo Akhlaaq daro iyo Waxbarashada aysan ku dadaalin ayaa dhaceysa,waana mida heysta maamoyin badan oo ka ganacsada qaadka inkasta oo awooda ay biday in ay qaadkaas nolosha qoyska ka raadiyaan.
Ug danbeytii waxaan qabaa in la joogo xiligiii la joojin lahaa Bahalkaas dhiig miiradka ah ee somali hor iyo gadaalkba la haray,xag dhaqaale xag caafimaad ama nolosha Qoyska oo ku yahay dumiye,waxaana maamulada dalka ka jira ila haboon ay xakameyaan si loo helo wadadii lagu xidhi lahaa dhaqalaaha baxayana jidad iyo Garoomo lagu dhiso kuwaasi oo la oran karo muddo Shan sano ah wax badan oo u Qabsoomi lahaa guud ahaan Dalka.